Afhayeenka Al-Shabaab oo markii u horeysay ka hadlay Cudurka COVID -19, tallooyinna soo jeediyay – Radio Damal
Afhayeenka Al-Shabaab oo markii u horeysay ka hadlay Cudurka COVID -19, tallooyinna soo jeediyay
Afhayeenka Guud ee Al-Shabaab Sheekh Cali Dheere ayaa ka hadlay cudurka Coronavirus oo caalamka ka dilaacay, isagoo tallooyin iyo dardaaran u jeediyay dadka Muslimiinta, si looga feejignaado cudurkaas.
Cali Dheere oo soo duubay farriin maqal ah oo soconeysa 28 daqiiqo ayaa ka hadlay asalka cudurkan, asbaabta keentay iyo waxa Muslimiinta uga aadan
“Cudurkan marka loo fiiriyo dalalka kuw augu cadawsanaa xaga Islaamka iyo Muslimiinta ayuu ku faafay, Cuduradan maxay yihiin maxaa u sabab ah, muslimiinta maxaa uga aadan, cidii muslim ee uu ku dhacay maxaa la gudboon, maxaase looga hortagi karaa ama u daawo ah, cudurada waa ciqaab iyo cannaan xaga rabi uga timid addoomadiisa, gaal iyo muslim, si uu xasuusuiyo dulmiga iyo macaasida faraha kula jiraan, ayna ogaadaan cadaab kan ka adag inuu dambeeyo”ayuu yiri Sheekh Cali Dheere.
Waxaa uu soo hadal qaaday tallaabooyinka dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada ay qaadeen, si cudurkan looga hortago, isagoo xusay in masaajidadii iyo dugsidii ay xiran yihiin, halka goobaha munkarka ay furan yihiin.
Cali Dheere ayaa sheegay in Xarunta Xalane oo uu tilmaamay inay aheyd ishii uu cudurkan ka soo bilowday uu furan yahay, halka masaajidadii la xiray oo aheyd halkii la rabay in loo cararo, si Alle loogu baryo.
“Umadda waa la cunaqabateeyay ishii cudurka ka soo faafayay ee Xalane cidna waxba kama qaban, loomana socdo, goobaha munkarka waa furan yihiin halka masaajidada iyo dusgiyada waa hore lagu soo rogay in la xiro, tan kale masaajidada waa halkii la rabay in loo cararo oo si allaah laga baryo in si uu cudurkan nooga badbaadiyo in ayaga laga bilaabo waxaa leenahay baroorta orgiga ka weyn, dano kale ayaa jira, in anagoo muslimiinta nagala xiro masaajidada”ayuu yiri Sheekh Cali Dheere.
Sidoo kale waxaa uu xusay in maamulka Koofur Galbeed ay xayiraado ku soo rogto deegaanada ay maamusho, isla markaana ay Ciidamo Itoobiyaan ku soo qulqulayaan magaalada Baydhabo, maadaama Itoobiya ay tahay meelaha la il daran cudurkan.
Ugu dambeyn waxaa uu ugu baaqay Muslimiinta ku nool Bariga Afrika, oo ay Soomaalida ku jirto inay alle u towbad keenaan, ugana soo laabato wixii dambi ah ee ka dhacay, in ruux walba is xisaabiyo, oo alle dambi dhaaf weydiisto, si uu u badbaado dadkiisana u badbaadaan.